Halkan ka daawo Xildhiban Publications more Videos on Youtube "Halgan & Hagardaamo"
Birmingham & Leicester oo lagu qabtay bandhigyo buugaagta Soomaalida. Xildhiban Publications;- 07-14 - January, 2011.
Waxaa madasha qayb libaax ka qaatay oo soo bandhigay qalabka hiddaha iyo dhaqanka gabdhaha Soomaaliyeed ee jaaliyadaha Soomaaliyeed ee maagalooyinkaas.
Goobta waxaa kale oo lagu soo bandhigay suugaan badan gabayo, buraamburro iyo faallo laga bixiyey kutubta qaar ka mid. Dhammaan dadkii madasha joogay waxay si wanaagsan u iibsadeen buuggii Halgan iyo Hagardaamo ee uu madaxweyne Cabdullahi Yuusuf soo diyaariyey. Qaar badan waxay nuqullo dheeraad ah u iibiyeen asxaabtooda deggen magaalooyin kale oo talefoonka iska soo daba dirayey si ay ugu iibiyaan nuqulka ay u baahnaayeen oo deggen meelo. Waxaa goobta ka hadlay masuuliyiin badan oo ay ka mid ahaayeen;-
Kulankii madaxweynihii dowladda KMG ah ee Soomaaliya C/llaahi Yuusuf Axmed uu magaalada London kula yeeshay Golaha Nabadgelyada Soomaalida ee Somali Peace Council bishii 23kii Febraayo sanadka 2007.